ကလေး ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ MRI - ကျွန်ုပ်တို့ဘာတွေလေ့လာသင်ယူပြီးပြီလဲ။ (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
ကလေးဦးနှောက်ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သိခဲ့ရဖူးခြင်းနှင့်အဘယ်မှာကျနော်တို့ Going ပါသလား? (2010)
အာရုံခံဆဲလျ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2012 ဖေဖော်ဝါရီ 23 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
အာရုံခံဆဲလျ။ 2010 စက်တင်ဘာ 9; 67 (5): 728-734 ။
ဂျေး N. Giedd1,* နှင့် Judith အယ်လ် Rapoport1
သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) ဓါတ်ရောင်ခြည် ionizing ၏အသုံးပြုမှုကိုမပါဘဲဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်၏ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မဗေဒမှမကြုံစဖူး access ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခု, ဦးနှောက် MRI Scan ဖတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကျန်းမာလူငယ်များနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါနာမကျန်းနှင့်အတူရှိသူများရောဂါမှလေးစားမှုနှင့်အတူဝယ်ယူခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီ, လိင်, မျိုးရိုးဗီဇနှင့် / သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအိုင်ကျူအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုထံမှကျော်။ အထီးကျန်မှုတွေအတွက်အဆောက်အဦများဆန့်ကျင်အဖြစ်အကြီးစားအသက်အရွယ် span longitudinal အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဘယ်နေရာတွေမှာလဲဆန်းစစ်လေ့လာမှုများနှင့်အာရုံကြော circuitry ၏အကဲဖြတ်ဖို့မြင့်တက်ပေးပြီဖြတ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းအရွယ်အစားကွဲပြားမှုနှိုင်းယှဉ်ကနဦးအစီရင်ခံပျမ်းမျှ။ MRI ကလေးအထူးကုအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်၏အကဲဖြတ်ဘို့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အဖြေရှာတဲ့ utility ကို၏နေဆဲမဟုတ်ပါသော်လည်း, atypical ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှိုင်းယှဉ်ပုံမှန်၏ပုံစံများရောဂါဗေဒယန္တရားများ elucidate နှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်ပစ်မှတ်အကြံပြုစေခြင်းငှါပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုငါတို့သည်ကျန်းမာရေးနှင့်နာမကျန်းအတွက် neurodevelopment ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI ၏ယေဘုယျပံ့ပိုးမှုများကိုအနှစ်ချုပ်။
လူ့ဦးနှောက်ကိုဘဝတလျှောက်လုံးပြောင်းလဲနေသောအပြောင်းအလဲများလျှက်ကွဲပြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာရှိခြင်းကွဲပြားခြားနားသောတစ်ရှူးအမျိုးအစားများ, ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အာရုံကြောဆားကစ်နှင့်အတူအထူးသဖြင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးရငျ့ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ longitudinal MR Scan ဖတ်အထွတ်အထိပ်အရွယ်အစားကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ဖြစ်ပေါ်အတူအဖြူကိစ္စ (WM) volumes ကိုနှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ (GM က) volumes ကို၏ inverted ဦး shaped ဘယ်နေရာတွေမှာလဲတိုးမြှင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ပုံ 1 829 ဘာသာရပ်များအနေဖြင့် 387 Scan ဖတ်ပါဝင်သော longitudinal လေ့လာမှုကနေအရွယ်အစားဘယ်နေရာတွေမှာအားဖြင့်အသက်အရွယ်ပြအသက်အရွယ် 3-27 နှစ်ပေါင်း (ကြည့်ရှု ပုံ 1 နှင့် ဖြည့်စွက်စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ).
ဦးနှောက် Morphometry ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း: ခေတ် 6-20 နှစ်များ
စုစုပေါင်းနှောက် Volume ကို
ကလေးစိတ်ရောဂါကုသမှုဌာနခွဲဆောင်များတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတွက်, စုစုပေါင်းနှောက်အသံအတိုးအကျယ် (ယောက်ျားလေးများအတွက် inverted ဦး shaped မိန်းကလေးတွေအတွက်အသက်အရွယ် 10.5 မှာ peaking ဒုံးကျည်သွားလမ်းနှင့် 14.5 အောက်ပါအတိုင်းLenroot et al ။ , 2007) ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်, ဦးနှောက် (အသက် 95 ဖြင့်၎င်း၏အထွတ်အထိပ်အရွယ်အစား 6% မှာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပုံ 1A) ။ ဤအအသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီး, အထီးအဘို့အုပ်စုပျှမ်းမျှဦးနှောက်အရွယ်အစားအမျိုးသမီးသည်ထက်ပိုကြီးတဲ့ ~ 10% ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် 10% ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်အရွယ်ရောက် neuroimaging နှင့် postmortem လေ့လာမှုစာပေနှင့်ကိုက်ညီသော်လည်းမကြာခဏယောက်ျား၏ပိုကြီးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအရွယ်အစားဆက်စပ်အဖြစ်ရှင်းလင်းထားပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးအထူးကုဘာသာရပ်များအတွက်ယောက်ျားလေးများအပျိုဖော်ဝင်ပြီးနောက်သည်အထိ '' အလောင်းတွေမိန်းကလေးတွေထက်ပိုကြီးတဲ့မဟုတ် '' ။ ဦးနှောက်အရွယ်အစားတင်းကျပ်စွာခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားနှင့်ဆက်စပ်မဟုတ်ကြောင်းထပ်မံသက်သေအထောက်အထားခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အသက်အရွယ် 17 မှတဆင့်တိုးမြှင့်နှင့်အတူဦးနှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားကရင့်ကျက်ဘယ်နေရာတွေမှာ၏အခြေခံအကျဆုံး decoupling ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်အရွယ်အစားကွာခြားချက်များသေချာပေါက်အလုပ်လုပ်တဲ့အားသာချက်သို့မဟုတ်အားနည်းချက်ကတော့မဆိုမျိုးပေးခြင်းအဖြစ်အနက်မရသင့်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး / အထီးကွဲပြားခြားနားမှု၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့စုစုပေါင်းအဆောက်အအုံဆိုင်ရာအစီအမံထိုကဲ့သို့သောအာရုံခံဆက်သွယ်မှုနဲ့အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအဖြစ် function သက်ဆိုင်ရာအချက်များအတွက်လိင် dimorphic ကွဲပြားခြားနားမှုပြန်ပါလာမည်မဟုတ်။
Sowell နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအသက်အရွယ် 45 နှင့်2(အကြားနှစ်ကြိမ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေ5သားသမီးများ၏အုပ်စုတစုထဲမှာဦးနှောက် volume ထဲမှာအပြောင်းအလဲများကို (ဆိတ်ကွယ်ရာ 11 နှစ်) တိုင်းတာSowell et al ။ , 2004) ။ အကွာအဝေးဦးနှောက်မျက်နှာပြင်နှင့်ဦးနှောက်၏ဗဟိုအပေါ်ရမှတ်အကြားတိုင်းတာခဲ့သည့်အတွက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်း, အသုံးပြုခြင်း, သူတို့ကအထူးသဖြင့်တိုကျရိုကျနှင့် occipital ဒေသများတွင်, ဒီအသက်အရွယ် span စဉ်အတွင်းဦးနှောက်အရွယ်အစားတိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Caviness et al ။ , 15 ယောက်ျားလေးများနှင့် 15-7 အသက် 11 မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး Cross-Section နမူနာအတွက်, (နှောင်းပိုင်းတွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism ၏ရှေ့မှောက်တွင်အကြံပြုခြင်း, ဒီအသက်အပိုင်းအခြားမှာအထီး cerebellum အမျိုးသမီးအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသံအတိုးအကျယ်မှာတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်းမCaviness et al ။ , 1996) ။ အဆိုပါ cerebellum ၏ function ကိုအစဉ်အလာမော်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆက်စပ်အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်ပေမယ့်ယခုလေ့ပု cerebellum လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တလျှောက်လုံးရင့်ကျက်သောအခြားအဆင့်မြင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာ (များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းလက်ခံခဲ့သည်ဖြစ်ပါသည်Riva နှင့် Giorgi, 2000; Schmahmann, 2004).
ကလေးစိတ်ရောဂါကုသမှုဌာနခွဲဆောင်များတွင်များတွင်စုစုပေါင်း cerebellum အရွယ်အစားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခါးဆစ်အထွတ်အထိပ်အရွယ်အစားယောက်ျားလေးများအတွက်မိန်းကလေးတွေအတွက် 11.3 နှင့် 15.6 မှာဖြစ်ပေါ်အတူတစ် inverted ဦး shaped ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းအောက်ပါ cerebrum ၏ဆင်တူဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ inverted ဦး shaped ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းနောက်တော်သို့လိုက်သော evolutionarily ပိုပြီးမကြာသေးမီ cerebellar hemisphere ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးမတူဘဲ, cerebellar vermis အရွယ်အစား (ဒီအသက်အရွယ် span ဖြတ်ပြီးမပြောင်းခဲ့ဘူးTiemeier et al ။ , 2010).
အကြီးအကျယ်အဆိုပါ "အဖြူကိစ္စ" myelin ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်များ၏အဖြူအရောင် axon န်းကျင်တစ်ခုကိုထုပ်ပိုးပြီး oligodendrocytes ကဖွဲ့စည်းဖက်တီးအဖြူထားသည်နှင့်အာရုံခံအချက်ပြမှုများ၏အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်။ WM ၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုယေဘုယျအား (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တလျှောက်လုံးတိုးပွါးLenroot et al ။ , 2007), အရာလူထုကိုအာရုံကြော circuitry ပိုမိုဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်အခြေခံလိမ့်မည်။ သာမကြာသေးမီကတန်ဖိုးထားခဲ့အရေးပါသောအင်္ဂါရပ် (myelin ရိုးရိုးဂီယာ၏မြန်နှုန်းမြင့်ဆုံးပါဘူးဆိုတာပါပဲပေမယ့်ဦးနှောက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်များဖန်တီးသောအာရုံခံပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများ၏အချိန်ကိုက်နှင့် synchrony modulatesလယ်ကွက်များနှင့် Stevens-ဂရေဟမ်, 2002) ။ ဤတသမတ်တည်း, ဒေသဆိုင်ရာအဖြူကိစ္စကြီးထွား map မှအဖြူကိစ္စသိပ်သည်းဆတစ်ဦးအတိုင်းအရှည်ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာမှုတစ်ခုကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားလျှင်မြန်ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောတိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတိုကျရိုကျနှင့်ယာယီဒေသများဆက်သွယ်ဝေစာတွေကိုဘယ်ဖက်တဖက်သတ်ဘာသာစကား-ဆက်စပ်ဒေသများ (ပိုမိုတိုးပြသခဲ့သည်စဉ် Corticospinal ဝစော, နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပြင်းအားအလားတူဖြစ်ကြောင်းတိုးပြသခဲ့သည်pause et al ။ , 1999).
WM ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတိုးပွါးသော်လည်း, GM က volumes ကို၏ဘယ်နေရာတွေမှာတစ်ခု inverted ဦး shaped ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းလိုက်နာပါ။ WM နှင့် GM က၏ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခါးဆစ်အာရုံကြောဆားကစ်အတွက်သူချင်းအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြပြီးရာသက်ပန်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးများကနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအာရုံခံ, glial ဆဲလ်များနှင့် myelin, တို့တွင်ရင်းနှီးဆက်သွယ်မှု belie ။ cortical GM ကမှာပြထားတဲ့နေကြတယ် ~4တစ်နှစ်ကြားကာလမှာလေးကြိမ်တစ်ခုချင်းစီကို scan ဖတ်ခဲ့သော 20 ဘာသာရပ်များ၏ Scan ဖတ်မှဆင်းသက်လာ 13 နှစ်အသက်အရွယ်2ထံမှ voxel အဆင့်မှာပြောင်းလဲ ပုံ2(ကာတွန်းမှာရရှိနိုင် http://www.nimh.nih.gov/videos/press/prbrainmaturing.mpeg()Gogtay et al ။ , 2004b) ။ အထွတ်အထိပ် GM ကသိပ်သည်းဆများ၏အသက်အရွယ်မူလတန်း sensorimotor ဒေသများရှိအစောဆုံးနှင့်ထိုကဲ့သို့သော dorsolateral prefrontal cortex, ယုတ်ညံ့ parietal နှင့်သာလွန်ယာယီ gyrus အဖြစ် Higher-အလို့ငှာအသင်းအဖွဲ့ဒေသများရှိနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုမဖြေရှင်းနိုင်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသော cortical GM ကလျှော့ချ Synaptic မောင်းနှင်နေကြသည်ဖို့ဒီဂရီအတွက် GM က / WM နယ်စပ်တလျှောက် myelination နှိုင်းယှဉ် pruning ဖြစ်ပါတယ် (Sowell et al ။ , 2001) ။ အဆိုပါ caudate နျူကလိယ၏အသံအတိုးအကျယ်, တစ်ဦး subcortical GM ကဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းသူတို့ကျယ်ပြန့်ဆက်သွယ်မှု (share ထားတဲ့နှင့်အတူတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဆင်တူထိပ်နှင့်အတူတစ်ဦး inverted ဦးပုံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းအောက်ပါအတိုင်းLenroot et al ။ , 2007).
cortical ထူ၏ဒေသဆိုင်ရာရင့်ကျက်: ခေတ် 4-21 နှစ်များ
ယခု neuroimaging စာပေ၌တည်တစ်ဦးကထင်ရှားတဲ့သဘောတရားအရွယ်အစားဘယ်နေရာတွေမှာအားဖြင့်အသက်အရွယ်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန် ပို. ပင်ဒါအကြွင်းမဲ့အာဏာအရွယ်အစားထက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ, ပုံမှန်အားဖြင့်ဘာသာရပ်များဖွံ့ဖြိုးဆဲ 692 ထံမှ 307 Scan ဖတ်ပါဝင်သော longitudinal လေ့လာမှုအတွက် cortical ထူဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခါးဆစ်ခြင်းဖြင့်အသက်အရွယ် (အသက် 20 နှစ်ပေါင်းမှာ cortical ထူများတွင်ကွဲပြားမှုထက်အိုင်ကျူပိုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ခဲ့ကြသည်Shaw et al ။ , 2006a) ။ အရွယ်အစားဘယ်နေရာတွေမှာအားဖြင့်အသက်အရွယ် (စ lobar အထွတ်အထိပ် GM က volumes ကိုအစောပိုင်းကအမျိုးသမီးအတွက် 1-3 နှစ်ပေါင်းပေါ်ပေါက်ဘယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism အဘို့ငြိမ်အတိုင်းအတာထက်ပိုမိုတှေးများမှာLenroot et al ။ , 2007) ။ လမ်းကြောင်း ပို. ပို. (အဖြစ်ကောင်းစွာ psychopathology ၏လေ့လာမှုများအတွက်ပိုင်းခြားသိမြင် phenotype အဖြစ်အသုံးချလျက်ရှိသည်Giedd et al ။ , 2008).
အတော်များများကစိတ်ရောဂါမမှန် (ကလေးနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှစ်ဦးစလုံး) ရှည်လျားဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်သိမ်မွေ့မူမမှန်ရောင်ပြန်ဟပ်မှတွေးဆခဲ့ကြသည်။ ခန္ဓာဗေဒဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့လာမှုများပြန်လည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သာမန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံစံများကဲ့သို့ဥာဏ်နာမကျန်းမှပလပ်စတစ်တုံ့ပြန်မှုတိုးချဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာအကြီးအတိမ်အနက်အတွက်မဆိုရောဂါဆွေးနွေးရန်ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ (ADHD) အတွက်လေ့လာမှုများတစ်စီးရီးခြုံငုံသုံးသပ်အလွန်အစောပိုင်း (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ) စတင်ခြင်း schizophrenia (cos), နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအချို့သရုပျဖျော key ကိုအခြေခံမူ။
အာရုံစူးစိုက်မှု-Deficit / Hyperactivity Disorder
ADHD (5% နှင့်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများ၏ 10% နှင့်အရွယ်ရောက်သူ 4.4% အကြားထိခိုက်, ကလေးဘဝအသုံးအများဆုံး neurodevelopment ရောဂါKessler et al ။ , 2005) ။ ဒီရောဂါကူးအငြင်းပွားဖွယ်ရာကြောင့်ယေဘုယျလူဦးရေကလေးဘဝရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ထက်ဝက်ခန့်များအတွက်ကောင်းသောရေရှည်ရလဒ်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေအတွက်မဆိုဇီဝအဖြေရှာတဲ့စမ်းသပ်, အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ကြိမ်နှုန်း (inattention, နာမငြိမ်ခြင်း, Impulse) ၏မရှိခြင်း၏တမျိုးသည်ကျန်ရစ်သေး လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးကုသမှုသုံးရင်။
ADHD ၏ cross-section ခန္ဓာဗေဒပုံရိပ်လေ့လာမှုများတသမတ်တည်း (ထိုတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုထောက်ပြCastellanos et al ။ , 2002), parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး (Sowell et al ။ , 2003), Basal ganglia (Castellanos နဲ့ Giedd, 1994), Corpus callosum (Giedd et al ။ , 1994), နှင့် cerebellum (Berquin et al ။ , 1998) ။ ဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်စဉ် imaging လေ့လာမှုများကိုလည်းတွေ့မြင်ပါ (cerebellum ကနေအစွမ်းထက် modulatory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူလက်ျာဘက်တိုကျရိုကျ-Basal ganglia circuitry ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုထောကျပံ့ Giedd et al ။ , 2001, ပြန်လည်သုံးသပ်) ။
သောကြောင့် ADHD တွင်တွေ့မြင်လက်တွေ့ရလဒ်များ၏ကျယ်ပြန့်ခြင်း, longitudinal လေ့လာမှုများအထူးစိတျဝငျစားခဲ့ကြပြီ။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများကို (တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးများအတွက်အများဆုံးသိသိသာသာ cortical ထူဘယ်နေရာတွေမှာလဲတစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှောင့်နှေးညွှန်ပြShaw et al ။ , 2007a) (ကြည့်ရှု ပုံ 3) ။ polymodal မတိုင်မီအထွတ်အထိပ် cortical ထူမရရှိစမူလတန်းအာရုံခံဒေသများ၏ယေဘုယျပုံစံ, High-အလို့ငှာအသင်းအဖွဲ့ဒေသများနှင့် ADHD မရှိဘဲနှစ်ဦးစလုံးရှိသူများအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သို့သော်ပျမ်းမျှအသက်အထွတ်အထိပ်ထူမှီသည့် cortical အမှတ် 50% ထိန်းချုပ်မှုများအတွက် ADHD နဲ့ 10.5 နှစ်ပေါင်း 7.5 နှစ်ပေါင်းခဲ့သော။ အကြီးမြတ်ဆုံးအသက်အရွယ်ကွာခြားချက်အတူဧရိယာထိန်းချုပ်မှုများအတွက် ADHD နဲ့ 10.9 နှစ်ပေါင်းရှိသူများအတွက် 5.9 နှစ်ပေါင်းမှာအထွတ်အထိပ်ထူရောက်ရှိ, အလယ် prefrontal cortex ဖြစ်ခဲ့သည်။
ADHD အတွက် cortical ထူ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှောင့်နှေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ADHD လေ့လာမှုတစ်ဦးကဆောင်ပုဒ်လက်တွေ့တိုးတက်မှုမကြာခဏပုံမှန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးဆီသို့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲတစ် convergence အားဖြင့်ထင်ဟပ်နေသည်နှင့် ADHD ၏ဇွဲကွာပုံမှန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတနေတိုးတက်သောမတူကွဲပြားခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ညာဘက် parietal cortical ပုံမှန်လက်တွေ့တိုးတက်မှုလိုက်ပါသွားရှိရာ cortex, (အဘို့ဤသရုပ်ပြပါပြီShaw et al ။ , 2006b) ကတညျးအဆိုပါယုတ်ညံ့ posterior ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏တိုးတက်သောအသံအတိုးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှု ADHD ၏ဇွဲကိုထင်ဟပ်ရှိရာ cerebellum, (များအတွက်Mackie et al ။ , 2007) ။ အလားတူနိယာမဟာ hippocampus များအတွက်ကိုင်ထားနိုင်တယ်: persistent ADHD hippocampal အသံအတိုးအကျယ် (တစ်တိုးတက်သောအရှုံးဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်ကိုသော်လည်းငွေလွှဲတဲ့သူ ADHD နှင့်အတူကလေးများ, ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဆင်တူသောလမ်းကြောင်းပြသShaw et al ။ , 2007b) ။ ဤရွေ့ကားအလွန်အမင်းသိသိသာသာတွေ့ရှိချက်လွတ်လပ်စွာဖြစ်ပေါ်ခြင်း, အရှင်တဦးတည်းရိုးရိုးအဖြစ် ADHD ကိုမမွငျနိုငျသညျ "နှောင့်နှေးတိုကျရိုကျဖှံ့ဖွိုးတိုး။ " ဒါဟာလည်းယနေ့အထိဤအတိုင်းအတာတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ရောဂါသို့မဟုတ်လက်တွေ့ရလဒ်ကိုဖြစ်စေဘို့ဆေးခန်းအသုံးဝင်သောမဟုတ်ကြောင်းအလေးပေးရပါမည်။
စိတ်ကြွဆေး, ADHD ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနှင့်အသုံးများကုသမှုဆက်လက်တည်ရှိတာဝန်အပြုအမူအပေါ်တိုးတက်အောင်နှင့်နှောင့်အယှက်ရောဂါလက္ခဏာတွေအသေးအဖွဲ။ အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများစိတ်ကြွဆေး subcortical နှင့်အဖြူကိစ္စဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သာမန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဆိုသောရည်ညွှန်း (Castellanos et al ။ , 2002) (cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတိုးချဲ့ပြီShaw et al ။ , 2009) နှင့် thalamus မှ (Logvinov et al ။ , 2009) ။ ဒီပုံမှန်လှုပ်ရှားမှု-မောင်းနှင်သို့မဟုတ်ကုသမှု-related ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်ဆေး၏တစ်ဦးထက်ပိုတိုက်ရိုက်အာရုံကြောအကျိုးသက်ရောက်မှုမသိသောဖြစ်နေဆဲရှိမရှိ။
ADHD အကောင်းဆုံးတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်နောက်ခံသိမြင်မှုချို့ယွင်းများ၏အစွန်းရောက်မှာလဲလျောင်း, Dimensional ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ epidemiological နှင့် neuropsychological သက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ ကျနော်တို့အရှင် syndrome ရောဂါမှာတွေ့ရှိသည်ဟု hyperactivity နှင့် Impulse အကြံအစည်၏လက္ခဏာများနှင့်အတူပုံမှန်အားဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးငယ်များအတွက်ဆိုပါက cortical ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမေးခဲ့တယ်။ အထူးသကျွန်တော်တို့ဟာယခင်က ADHD တှငျတှေ့ရသောနှောင်းပိုင်းကငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်တစ်နှေးကွေးမှုနှုန်း, လည်းအဆိုပါရောဂါ၏ Dimensional များအတွက် neurobiological သက်သေအထောက်အထားများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးငယ်များအတွက် hyperactivity နှင့် Impulse လက္ခဏာတွေ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Schizophrenia ကျယ်ပြန့် (က neurodevelopmental ရောဂါစဉ်းစားသည်Weinberger, 1987; Rapoport et al ။ , 2005) ။ (1) Scan ဖတ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအရှိဆုံးပြောင်းလဲနေသောနှင့်သက်ဆိုင်ရာကာလအတွင်းမှာရယူနိုင်ပြီးပုံမှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-စတင်ခြင်းရောဂါ (2) ကလေးဘဝ-စတင်ခြင်း counterparts တွေကိုများသောအားဖြင့်ပြသအဖြစ် cos ၏လေ့လာမှု neurodevelopmental သွေဖီများ၏အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေနှင့်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုပြသနိုင်ဖို့ပိုပြီးလွှမ်းမိုးမှုခံရဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိတစ်ဦးထက်ပိုပြင်းထန် phenotype ။
cos ၏လေ့လာမှုတစ်ခု 1990 ကတည်းက NIMH မှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရောဂါမူးယစ်ဆေးဝါး-အခမဲ့အတွင်းလူနာလေ့လာရေးပြီးနောက်အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ပြုပြင်မထားတဲ့ DSM-III ကို-R / IV စံသုံးပြီး လုပ်. ဖြစ်ပါသည်။ ရှားပါးပေမယ့်, ဆေးခန်းရှိသမျှတို့, ဖြစ်စဉ်မိသားစုနှင့် cos ပြပွဲများတွင် neurobiological လေ့လာမှုများအတွက်, ဆင်းရဲသားကို-ရလဒ်ကို AOS အမှုပေါင်းတူအဖြစ်မကြာခဏ (ယနေ့အထိဎ = 1) အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-စတင်ခြင်း schizophrenia (AOS), အ cos အမှုပေါင်းအဖြစ် ~ 500 / 102th ဖြစ်ပေါ် ရောဂါဤနှစ်ခုပုံစံများအကြားဆက်လက်အကြံပြု AOS ၌ရှိသကဲ့သို့အလားတူတွေ့ရှိချက်, (Gogtay နှင့် Rapoport, 2008).
အဆိုပါ cos ဆောင်များတွင်ထံမှတွေ့ရှိချက်တိုးမြှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricular အသံအတိုးအကျယ်ဖေါ်ပြခြင်းတို့သည် AOS စာပေနှင့်ကိုက်ညီများမှာ Neuroimaging စုစုပေါင်းနှင့်ဒေသတွင်း cortical GM က volumes ကိုယုတ်လျော့, hippocampal နှင့် amygdala volumes ကိုလျော့နည်းသွားနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းတိုးတက်ကြောင်း Basal ganglia volumes ကိုတိုးမြှင့် (ကြည့်ရှု Gogtay နှင့် Rapoport, 2008, ပြန်လည်သုံးသပ်) ။ အများစုမှာသိသိသာသာ longitudinal ဒေတာများကထုတ်ဖော်ပြသ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတိုးတက်သော cortical GM ကအရှုံးဖြစ်ပါသည်Thompson က et al ။ , 2001) နှင့်အဖြူကိစ္စဖှံ့ဖွိုးတိုးနှောင့်နှေး (Gogtay et al ။ , 2008) ။ (cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်၏ကျန်းမာအုပ်စုတစ်စုလမ်းကြောင်း cos တွင်တွေ့မြင် cortical GM ကအရှုံး၏အရှိန်ပုံစံနှင့်အတူ "ထဖမ်းမိ" အဖြစ်) ကို cortical GM ကလျှော့ချရေးအသက်အရွယ်ပိုမို circumscribed ဖြစ်လာသည်။ schizophrenia အတွက် cortical GM ကအရှုံး glia, Synaptic နှင့် dendritic Arbore ပါဝင်ပါသည်ထားတဲ့ "neuropil" ၏အရှုံးကြောင့်ဖြစ်ပြနှင့် vasculature (ထားပြီးSelemon နှင့် Goldman-Rakic, 1999) ။ Postmortem လေ့လာမှုများ schizophrenia မကျယ်ပြန့်အာရုံခံဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အလားအလာအာရုံခံဒဏ်ရာတစ်ခု glial တုံ့ပြန်မှုပြသပါ။ ဤအများနှင့်အခြားဆုံအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီး, ပုံမှန်မဟုတ်သော Synaptic function ကိုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမော်ဒယ်များ (predominated ပါပြီWeinberger et al ။ , 1992).
အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအသက်တာ၏ပထမဦးဆုံး3နှစ်အတွင်းဆက်သွယ်ရေး, လူမှုရေးဆက်နွယ်မှုနှင့်ကျပုံစံအပြုအမူများ၏နယ်ပယ်ထဲမှာပုံမှန်မဟုတ်သောအပြုအမူများကသတ်မှတ်ထားသည်။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာတွေနဲ့ကလေးတွေမှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းအတာ overshoots ထားတဲ့ဦးနှောက်ကြီးထွားမှု, တစ်ဦးအစောပိုင်းအရှိန် (ယာယီနှောက်ပျတိုးဖို့ဦးဆောင်ရှိCourchesne et al ။ , 2007) ။ ဦးနှောက်ပုံရိပ်နှင့် cos ၏မျိုးဗီဇလေ့လာမှုမြား (cos များအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း cortical ထူအတွက်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အချိန်မတန်မီကျဆင်းခြင်းအတွက်အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်တာကာလအတွင်းပိုပြီးလျင်မြန်စွာဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို) အစောပိုင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် "ညာဘက်ကိုပြောင်းကုန်ပြီ" ကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာမှမမျှော်လင့်ဘဲလင့်များပေးအပ် ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်ရပ်များ (၏ပြောင်းလဲအချိန်ကိုက်၏တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှအလယ်အလတ် phenotypeRapoport et al ။ , 2009) သို့မဟုတ်အခြား "ဝင်ရိုးစွန်း" ဦးနှောက်လမ်းကြောင်းအဆိုပြုထားပြီ (Crespi et al ။ , 2010) ။ ကျနော်တို့အနာဂတ်ကုသမှုသုတေသနဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်ပိုပြီးယေဘုယျ "ပုံမှန်သက်ရောက်မှု" ရှိသည်သောအေးဂျင့်များပေါ်အာရုံစူးစိုက်လိမ့်မည်ဟုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ယနေ့အထိအထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများထိုသို့သောသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါန့်အသတ်သက်သေအထောက်အထား (ရှိSobel et al ။ , 2010).
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, လက်တွေ့လေ့လာမှုများအဖြေရှာတဲ့မဟုတ်ပေမယ့်ပုံမှန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးကနေသွေဖီ၏အချိန်ကိုက်နှင့်သဘာဝ elucidate မှစတင်သည်ဟုရောဂါ-သတ်သတ်မှတ်မှတ်အုပ်စုသည်ခန္ဓာဗေဒဦးနှောက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြသည်။ တစ်ဦး endophenotype အဖြစ်ဘယ်နေရာတွေမှာ (အသက်အားဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာ morphometric အစီအမံ) အသုံးပြုခြင်း (အငြိမ်အစီအမံကိုမကျင့်ဘယ်မှာပါဝါခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကိုဖြစ်နိုင်သည်Giedd et al ။ , 2008) ။ ဒါဟာတူညီတဲ့မော်လီကျူးဗီဇအန္တရာယ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ, စိတ်ကြွရောဂါ, schizophrenia, ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုများနှင့်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါအပါအဝင်စိတ်ရောဂါ phenotypes ၏အကွာအဝေးနှင့်ဆက်စပ်နိုင် ပို. ပို. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းပြန်, တူညီတဲ့စိတ်ရောဂါ phenotype ထိုကဲ့သို့သောမိတ္တူအရေအတွက်ကိုမျိုးကွဲ (အဖြစ်မြောက်မြားစွာတစ်ဦးချင်းရှားပါးမျိုးဗီဇမူမမှန်ထင်ဟပ်ဖွယ်ရှိသည်Bassett et al ။ , 2010; McClellan နှင့်ဘုရင် 2010) ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အချိန်ကိုက်အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇမျိုးကွဲများ၏အခန်းကဏ္ဍ Exploring sensitivity ကိုနှင့်တိကျသောဤကိစ္စများအချို့ကိုရှင်းလင်းပေမည်။
အထက်တွင်တင်ပြသည့်အချက်အလက်များ၏အားလုံး (တစ်ဦးချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးဦးနှောက်အရွယ်အစားအတိုင်းအတာ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ၏အလငျး၌အနက်ရမည်ဖြစ်သည်Lang et al ။ , 1997) ။ ဒီအမြင့်မားတဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဖြစ်ကောင်းစွာဦးနှောက် substructures ၏အစီအမံဖို့ကိုတိုးချဲ့။ မြင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအများစုအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခံရမှုအတွက်အများဆုံးအစီအမံများသိသိသာသာထပ်တူစိတ်ရောဂါ neuroimaging နှင့်အထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အပြုအမူသို့မဟုတ်နိုင်စွမ်းနှင့် ပတ်သက်. ခန့်မှန်းစေ neuroimaging သုံးပြီးအတွက် sensitivity ကို / specification များအဖြေရှာတဲ့ utility ကိုများအတွက်လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အုပ်စုတစ်စု၏ပျမ်းမျှခန္ဓာဗေဒ MRI ကွဲပြားခြားနားမှုအားလုံးအဓိကစိတ်ရောဂါမမှန်များအတွက်အစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့်ဥပမာ, MRI သည်လက်ရှိတွင်မည်သည့်များ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရောဂါဘို့ညွှန်ပြမထားပါ။ အုပ်စုတစ်စု၏ပျမ်းမျှအပေါ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဦးနှောက်အကြားကစာရင်းအင်းကြံ့ခိုင်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ပေမယ့်အလားတူပဲ, စိတ်ချလက်ချကြောင့်ယောက်ျားမိန်းမရှိမရှိပိုင်းခြားတစ်ဦးချင်း MRI ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအပေါ်ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်အမျှအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတို့သညျအဘို့အမြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမိန်းမတို့အဘို့အမြင့်ထက်သိသိသာသာကြီးမြတ်တော်မူ၏။ သို့သော်တစ်ဦးတည်းအမြင့်တစ်စုံတစ်ဦး၏လိင်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောလူတို့သညျထက်ဤမျှလောက်များစွာသောမိန်းမတို့သည်ကြီး၏ရှိပါတယ်။ အမြင့်အတွက်အထီး / အမျိုးသမီးကွဲပြားမှုအများဆုံး neuroimaging သို့မဟုတ် neuropsychological အစီအမံများနှင့်ပတ်သက်ပြီးနှစ်ကြိမ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားရှိပါတယ်။
အုပ်စုတစ်စု၏ပျမ်းမျှကွဲပြားခြားနားမှုကနေတစ်ဦးချင်းစီကိုအသုံးပြုခြင်းမှ Going neuroimaging ၏ဉီးစိန်ခေါ်မှုများတစ်ခုဖြစ်သည်။ neuroimaging ၏ utility ကို၏အဖြစ်တာကဒီစိန်ခေါ်မှုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရနိုင်သောအတိုင်းအတာပေါ်တွင်မူတည်သည်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဘို့စာရင်းကိုင်ချုပ်အရေးပါမှုသည်။ အောက်ပါအပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့ကဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အပြောင်းအလဲသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လူသိများသတ်မှတ်ချက်အချို့ကိုဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကလေးဘဝနဲ့ဆယ်ကျော်သက်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒ၏ Developmental လမ်းကြောင်းအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
တူညီသောမျိုးဗီဇ၏ ~ 100% မျှဝေသောသူ monozygotic (MZ စ) တူညီသောမျိုးဗီဇ၏ ~ 50% မျှဝေသောသူအမွှာ, နှင့် dizygotic (DZ) အမွှာအကြားတူညီနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့၏ဘယ်နေရာတွေမှာအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့် nongenetic လွှမ်းမိုးမှု၏ဆွေမျိုးပံ့ပိုးမှုများကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု။ ဤမေးခွန်းကိုလိုက်ရန်, ငါတို့အမွှာတစ်ဦး longitudinal neuroimaging လေ့လာမှုပို့ချနေကြသည်နှင့်လက်ရှိ 600 MZ စနှင့် 90 DZ အမွှာအားလုံးထံမှ ~ 60 Scan ဖတ်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ် (SEM) ပတ်ဝန်းကျင် interaction ကနှင့်အမွှာအချက်အလက်များ၏သမားရိုးကျအနက်ကိုစိန်ခေါ်သောအခြား epistatic ဖြစ်ရပ်×ဗီဇ×အသက်အရွယ်အကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ SEM (က) ထို့အပြင်မျိုးရိုးဗီဇ, (ဂ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် shared, ဒါမှမဟုတ် (E) နဲ့ထူးခြားတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေ (အဖြစ်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြထားတယ်Neal နှင့် Cardon, 1992) ။ ဆန်းစစ်အရှိဆုံးဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအဘို့, ထို့အပြင်မျိုးရိုးဗီဇသက်ရောက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ "heritability") မွငျ့မားဖြစ်ကြပြီး shared သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (အနိမ့်များမှာWallace et al ။ , 2006) ။ (GM, WM Sub-အခန်းအပါအဝင်) စုစုပေါင်းနှောက်နှင့် lobar volumes ကိုများအတွက်အပိုဆောင်းမျိုးဗီဇသက်ရောက်မှု 0.77 ထံမှ 0.88 အရွယ်ရှိ; အဆိုပါ caudate အဘို့, 0.80; နှင့် Corpus callosum, 0.85 သည်။ ကျယ်ပြန့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကြားကာလသတိထားအနက်ထိုက်သော်လည်းအဆိုပါ cerebellum သာ 0.49 တစ်ခုထို့အပြင်မျိုးရိုးဗီဇအကျိုးသက်ရောက်မှုအတူထူးခြားတဲ့ heritability ပရိုဖိုင်းရှိပါတယ်။ မြင့်မား heritable ဦးနှောက် morphometric အစီအမံ (အမွေဆက်ခံစရိုက်များများအတွက်ဇီဝအမှတ်အသားများများကိုမျိုးရိုးဗီဇချိတ်ဆက်နှင့်ဖွဲ့စည်းလေ့လာမှုများအဘို့အပစ်မှတ်အဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါGottesman နှင့်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, 2003).
Multivariate အတူတူပင်မျိုးဗီဇသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေအများအပြား neuroanatomic အဆောက်အဦများအထောက်အကူပြုပေးသောဖို့ဒီဂရီ၏အကဲဖြတ်ခွင့်ပြုလေ့လာဆန်းစစ်။ အဆိုပါ univariate variable တွေကိုကဲ့သို့ပင်ဤ interstructure ဆက်စပ်မှုမျိုးဗီဇသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စေမူရင်းဆက်ဆံရေးသို့ parceled နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအသိပညာဗဟုသုတဖြင့်ဖြန့်ဝေအာရုံကြောကွန်ရက်များကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါမျိုးဗီဇ၏သက်ရောက်မှုအဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဦးနှောက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါကြားဝင်နားလည်သဘောပေါက်အပါအဝင်အမွှာဒေတာ, အများစု၏အနက်ကိုအဘို့အလှနျအရေးပါသည်။ shared သက်ရောက်မှု cortical ထူအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ၏ 60% များအတွက်စာရင်းကိုင်တစ်ခုတည်းမျိုးရိုးဗီဇအချက် (အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုထက်ကှဲလှဲပိုမိုများအတွက်အကောင့်Schmitt et al ။ , 2007) ။ ခြောက်လအချက်များပြင်းပြင်းထန်ထန်တူညီသောနောက်ခံမျိုးဗီဇအချက်များကလွှမ်းမိုးအဆောက်အဦများ၏ငါးအုပ်စုများနှင့်အတူကျန်ရှိနေသေးသောကှဲလှဲ၏ 58% နေရာယူထားသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် Rakic ​​(နေဖြင့်အဆိုပြု neocortical တိုးချဲ့၏ radial ယူနစ်အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီများမှာRakic, 1995) နှင့်ဆဲလ်ဌာနခွဲအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသည်ဗီဇကမကထပြုခဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုစုစုပေါင်းဦးနှောက် volume ထဲမှာ interspecies ကွဲပြားခြားနားမှုနောက်ကွယ်ကတွန်းအားဖြစ်ကြောင်းယူဆချက်နှင့်အတူ (Darlington et al ။ , 1999; Finlay နှင့် Darlington, 1995; Fishell, 1997) ။ သာတိကျသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်ရှေးခယျြထားစေခြင်းငှါအခါတစျခုလုံးကိုဦးနှောက်ကိုတိုးချဲ့ဇီဝြဖစ်အကုန်အကျဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဆဲလ်အချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်စေရန်လိုအပ်သည်ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ၏နံပါတ်လုံးဝနှောက်အဖွဲ့အစည်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်သည်ထက်ဝေးလျော့နည်းလိမ့်မည်။
heritability အတွက်ခေတ်-related အပြောင်းအလဲများကိုဗီဇစကားရပ်၏အချိန်ကိုက်ချိတ်ဆက်နှင့်မမှန်၏စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ (ယေဘုယျအားဖြင့် heritability WM များအတွက်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးပွါးနှင့် GM က volumes ကိုများအတွက်လျော့ကျWallace et al ။ , 2006), heritability ဟာတိုကျရိုကျ cortex, parietal နှင့်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး (အတွင်းဒေသများတွင် cortical အထူအဘို့အတိုးပွါးသော်လည်းLenroot et al ။ , 2009) ။ အခြို့သောဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းမျိုးရိုးဗီဇသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုမှအထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံကြသောအခါ၏အသိပညာအရေးကြီးသောပညာရေးနှင့် / သို့မဟုတ်ကုထုံးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Male / Female ကွာခြားချက်များ
အားလုံးနီးပါးအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအကြားကွဲပြားခြားနားသောပျံ့နှံ့, စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်နှင့် symptomatology ရှိသည်ပေးထား, ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဦးနှောက်ဘယ်နေရာတွေမှာအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုရောဂါဗေဒ၏လေ့လာမှုများအဘို့အမြင့်မားသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာအတွက်အားကောင်းတဲ့လိင်ကွဲပြားမှု GM ကအသံအတိုးအကျယ်ထိပ်ယေဘုယျအားအစောပိုင်းကအမျိုးသမီးအတွက် (1-3 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ပေါ်အတူအားလုံးနီးပါးအဆောက်အဦများအတွက်မှတ်ချက်ပြုကြသည်Lenroot et al ။ , 2007) ။ လိင်ခရိုမိုဆုမ်းနှင့်ဟော်မုန်းများ၏ဆွေမျိုးပံ့ပိုးမှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်, ငါတို့အုပ်စုသည်ပုံမှန်မဟုတ်လိင်ခရိုမိုဆုန်းမူကွဲ (ဥပမာ XXY, XXX က, XXXY, XYY) (နဲ့အတူဘာသာရပ်များလေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်Giedd et al ။ , 2007), အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်အတူဘာသာရပ်များ (ဥပမာမွေးရာပါ adrenal hyperplasia, မိသားစုအထီး ပတျသကျ. အပျိုဖော်ဝင်စ, ကုရှ syndrome ရောဂါ) (Merke et al ။ , 2003, 2005).
မည်သည့် quantifiable အပြုအမူသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ parameter နဲ့အမျှတစ်ဦးချင်းစီ genotype အပေါ်အခြေခံပြီးအုပ်စုများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ မတူညီသော genotype အုပ်စုများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ၏ဦးနှောက်ပုံရိပ်တွေထို့နောက်ပျမ်းမျှခြင်းကိုနှင့်ကစာရင်းအင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေမှာအများဆုံးမကြာခဏလေ့လာခဲ့ဗီဇတွေထဲကအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအဘို့အအန္တရာယ် modulates ရာအီး (apoE), apolipoprotein ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ4allele ၏သယ်ဆောင်လျော့နည်းသွားအန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်သော်လည်း apoE ၏2allele ၏ carriers, အန္တရာယ်တိုးလာကြပါပြီ။ apoE alleles ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်သက်သေပြကွဲပြား neuroanatomic လက်မှတ်ပေါင်းရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကျနော်တို့ 529-239 နှစ်ပေါင်း (အသက်4ကျန်းမာဘာသာရပ်များအနေဖြင့် 20 Scan ဖတ်လေ့လာShaw et al ။ , 2007c) ။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအိုင်ကျူ-genotype interaction ကရှိခဲ့ပေမယ့်, cortical ထူအပေါ်တစ်ဦး stepwise အကျိုးသက်ရောက်မှုအလယ်မှာအကွာအဝေးအတွင်း4homozygotes, နှင့်3အဖွဲ့ထူ, အ2အဖွဲ့အပါးလွှာဆုံးပြနှင့်တကွ, entorhinal နှင့်ညာဘက် hippocampal ဒေသများတွင်ရှိ၏။ ဤရွေ့ကားဒေတာကလေးအထူးကုအကဲဖြတ်တနေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-စတင်ခြင်းမမှန်များအတွက်သိကောင်းစရာများဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အကျဉ်းချုပ် / ဆွေးနွေးချက်
ကျန်းမာရေးနှင့်နာမကျန်းနှစ်ဦးစလုံးမှသက်ဆိုင်ရာရင့်ကျက် themes များဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲစဉ်းစား၏အရေးပါမှုနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးအစီအမံ၏မြင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပါဝင်သည်။ မြင့်မားတဲ့တစ်ဦးချင်းစီအပြောင်းအလဲနေသော်လည်းပျှမ်းမျှရင့်ကျက်ပြောင်းလဲမှုအများအပြားကစာရင်းအင်းကြံ့ခိုင်ပုံစံများထင်ရှားရှိပါတယ်။ အထူးသ WM volumes ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် GM က volumes ကိုထိုကဲ့သို့သော dorsolateral prefrontal cortex အဖြစ်မြင့်မားတဲ့အသင်းအဖွဲ့ဒေသများရှိနောက်ဆုံးပေါ်ထိပ်နဲ့ inverted ဦးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းလိုက်နာပါ။ ဤရွေ့ကားခန္ဓာဗေဒအပြောင်းအလဲများကို electroencephalograph, အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI, postmortem နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်အတွက်တိုးမြှင့် "ဆက်သွယ်မှု" ကိုညွှန်း neuropsychological လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ "ဆက်သွယ်မှု" အတော်ကြာမှ neuroscience သဘောတရားများကိုရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့။ ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှုများမှာတော့ဆက်သွယ်မှုဘုံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲဝေမျှသောဦးနှောက်၏ဒေသများအကြားတစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ link ကိုဆိုလိုနိုင်ပါ။ ဦးနှောက် function ကို၏လေ့လာမှုများမှာတော့ဆက်သွယ်မှုတာဝန်စဉ်အတွင်းအတူတကွကိုသက်ဝင်သောဦးနှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအကြားဆက်ဆံရေးဖော်ပြသည်။ မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများအတွက်ကအတူတူပင်မျိုးဗီဇသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေကလွှမ်းမိုးဖြစ်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောဒေသများကိုရည်ညွှန်းသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆက်သွယ်မှုတိုးဤအမျိုးအစားအားလုံး။ အားဖြင့်အသေးစိတ်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရုံကြော circuitry နှင့်လူထုကိုဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းများတို့တွင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဆက်ဆံရေး Characterizing neuroimaging သုတေသနများ၏လှုပ်ရှားဆုံးဒေသများ၏တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ပါဝါစ et al ။ (2010) ၏ (ဒီပြဿနာ အာရုံခံဆဲလျ).
အခြားအပိုမြင့်အသင်းအဖွဲ့ဒေသများလည်းအတော်လေးနှောင်းပိုင်းကရင့်ကျက်သော်လည်း, dorsolateral prefrontal cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသင်တန်းအထင်ရှားဆုံးသောကွောငျ့တရားသဖြင့်စီရင်, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်က၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏လူမှုရေး, ဥပဒေပြုရေး, တရားစီရင်ရေး, မိဘအုပ်ထိန်းထိခိုက်ဟောပြောချက်နှင့်ပညာရေးနယ်ပယ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ ((စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ၏ထိုင်ခုံများမှာအရာ, နောက်ပိုင်းတွင်-ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကွန်ရက်များ) အစောပိုင်းတွင်-ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း limbic သည့်စနစ်ကွန်ရက်များနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်-ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းတိုကျရိုကျစနစ်များအကြားတစ်ဦးပြောင်းလဲချိန်ခွင်လျှာကိုညွှန်းလည်းစာပေ၏ကြီးထွားလာသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်ကာဇီ et al ။ , 2010a [၏ဤပြဿနာ အာရုံခံဆဲလျ]) ။ အဆိုပါတိုကျရိုကျ / limbic ကြားဆက်ဆံရေးမြင့်မားတဲ့ dynamic ဖြစ်ပါတယ်။ limbic နှင့်သိမြင်မှုစနစ်များအကြားဆက်စပ်မှုတွေအသိအမှတ်ပြုထားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနားလည်သဘောပေါက်ဘို့အလွန်အရေးကြီးသည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများသောအားဖြင့် "အအေးသိမှတ်ခံစားမှု" -hypothetical, အနိမ့်စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေများ၏အခြေအနေများအောက်တွင်ကောက်ယူနေကြသည်။ သို့သော်မကြာခဏအောင်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာဆုံးဖြတ်ချက်ရွယ်တူချင်းဖိအားများနှင့်အမှန်တကယ်အကျိုးဆက်များနှင့်အတူ, "ပူသိမှတ်ခံစားမှု" -high arousal ၏အခြေအနေများအောက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Neuroimaging စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပူနှင့်အအေးသိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာပါဝင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောဇီဝ circuitry ပိုင်းခြားဆက်လက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းရင့်ကျက်အောင်ဘယ်လို map မှစတင်နေကြသည်။ ဥပမာ, ဆယ်ကျော်သက်ပုံကြီးချဲ့နျူကလိယကလေးများသော်လည်းမ Orbital တိုကျရိုကျ activation တစ်ဦးခြားနားချက် (နှိုင်းယှဉ်ဆုချမှ activation accumbens ပြသသွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006) ။ အဆိုပါ PFC ၏ကြာရှည်ရငျ့လည်း ((nonexperiential အမှတ်တရများ subserving အစောပိုင်းကဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း medial ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအဆောက်အဦများမတူဘဲ၌) အတှေ့အကွုံအသေးစိတ်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအသက်အရွယ်-related တိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပြသထားသည်Ofen et al ။ , 2007).
အဆိုပါ "ခရီးအဖြစ်ဦးတည်ရာ" သဘောတရားကဦးနှောက်နှင့်ကလေးများအတွက်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုး၏အခြေခံကျကျပြောင်းလဲနေသောသဘာမီးမောင်းထိုးပြ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဝေဖန်ဇာတ်စင်ဖြစ်ပါသည်, ဤအသက်အရွယ်အုပ်စုတွင်ပုံမှန်ရင့်ကျက်သောအပြောင်းအလဲများနှင့် psychopathology စတင်ခြင်းအကြားဆက်ဆံရေးတက်ကြွစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဆယ်ကျော်သက်နှစ်အတွင်းစိတ်ရောဂါနာမကျန်းအတော်ကြာအတန်း၏စတင်ခြင်း (ဥပမာ, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ခံစားချက်မမှန်, စိတ္တ, မမှန်စားသုံးခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု) (Kessler et al ။ , 2005) (ဤအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်များစွာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်သောမည်အကြောင်း,pause et al ။ , 2008) ။ ပိုများသောအမြင်ကျယ်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကိုဖြတ်ပြီးတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်ယန္တရားများနှင့်လွှမ်းမိုးမှုများနားလည်သဘောပေါက်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွေ့မမှန်နှင့်အကောင်းဆုံးကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြှင့်တင်ရန်လမ်းကြောင်းကို elucidating များအတွက်လမ်းညွှန်ကြားဝင်ကူညီပေးဖို့ဦးနှောက်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ plasticity အသုံးချနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဖြည့်စွက်သတင်းအချက်အလက်များ အတိုင်းအတာများထည့်သွင်းစဉ်းစားပါဝင်သည်နှင့် Doi မှာအွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်: 10.1016 / j.neuron.2010.08.040 ။
Bassett AS, Costain, G, အလန် Fung WL, စယ် KJ, ပီယပ် L ကို, Kapadia R ကို, Carter က RF, Chow EW, Forsythe PJ ။ schizophrenia များ၏ကနေဒါမြစ်လူဦးရေအတွက်ဆေးခန်းကိုရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. မိတ္တူအရေအတွက်ကများပါတယ်။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2010 Doi: 10.1016 / j.jpsychires.2010.06.013 ။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။ အွန်လိုင်းဇူလိုင်လ 18, 2010 ထုတ်ဝေသည်။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berquin ကို PC, Giedd ဖြစ်မှု, Jacobsen LK, ဟမ်ဘာဂါ SD, Krain AL, Rapoport JL, Castellanos FX ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါအတွက် Cerebellum: တစ် morphometric MRI လေ့လာမှု။ အာရုံကြော။ 1998; 50: 1087-1093 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, Duhoux S ကို Cohen ကို MM ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်: အဘယျသို့ကူးစက်ခြင်း, အကူးအပြောင်းများနှင့်ဘာသာပြန်ချက်ကြောင့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသနည်း အာရုံခံဆဲလျ။ 2010a; 67: 749-760 ။ ဤပြဿနာ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Castellanos FX, Giedd ဖြစ်မှု။ ADHD အတွက် caudate နျူကလိယ၏ quantitative shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 35: 725 ။ [PubMed]
Castellanos FX, Lee က PP, Sharp ကဒဗလျူ, Jeffries NO, Greenstein DK, Clasen LS, Blumenthal JD, ယာကုပ်သည် RS, Ebens CL, ဝေါလ်တာ JM, et al ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဦးနှောက်ထဲမှာ volume မူမမှန်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲ။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2002; 288: 1740-1748 ။ [PubMed]
Caviness VSJ, Jr ကနေဒီမလုပ်ကြံခံရ DN, Richelme ကို C, Rademacher J ကို, Filipek PA ဆိုပြီး။ လူ့ဦးနှောက်ကိုအသက်အရွယ် 7-11 နှစ်ပေါင်း: သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးထုထည်ကြီးမားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Cereb Cortex ။ 1996; 6: 726-736 ။ [PubMed]
Courchesne အီးပီယပ် K ကို Schumann CM, Redcay အီး, Buckwalter ဂျာကနေဒီ DP, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက်မော်ဂန်ဂျေမြေပုံအစောပိုင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2007; 56: 399-413 ။ [PubMed]
Crespi B က, ခမည်းတော်အရာ၌ P ကို, Elliot အမ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ Sackler colloquium အတွက်: အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့် schizophrenia များ၏နှိုင်းယှဉ် Genomics ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2010; 107 (ပျော့ပျောင်း 1): 1736-1741 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Darlington RB, Dunlop လုပ် SA, Finlay BL ။ metatherian နှင့် eutherian နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုး: အပြောင်းအလဲနှင့်သတ်။ J ကို comp Neurol ။ 1999; 411: 359-368 ။ [PubMed]
fields RD, အာရုံခံဆဲလျ-glia ဆက်သွယ်ရေးသို့ Stevens-ဂရေဟမ်ခနယူးထိုးထွင်းသိမြင်။ သိပ္ပံ။ 2002; 298: 556-562 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Finlay BL, Darlington RB ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေရဲ့ဦးနှောက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အီဗိုလူးရှင်းအတွက်နှင့်ဆက်စပ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး။ သိပ္ပံ။ 1995; 268: 1578-1584 ။ [PubMed]
အဆိုပါနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ telencephalon အတွက် Fishell G. အဒေသ။ Curr Opin Neurobiol ။ 1997; 7: 62-69 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Parra အီး, Penn J ကို, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 6885-6892 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Castellanos FX, Casey BJ, Kozuch P ကိုဘုရင် AC အ, ဟမ်ဘာဂါ SD, Rapoport JL ။ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါအတွက် Corpus callosum ၏ quantitative shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 151: 665-669 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, Molloy အီး, Castellanos FX ။ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ၏ဦးနှောက်ပုံရိပ်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2001; 931: 33-49 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Clasen LS, Wallace GL, Lenroot RK, Lerch JP, ဝဲလ် EM, Blumenthal JD, နယ်လ်ဆင် je, Tossell JW, Stayer ကို C, et al ။ XXY (Klinefelter syndrome ရောဂါ): တစ်ဦးကလေးအရေအတွက်ကဦးနှောက်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကိစ္စတွင်-ထိန်းချုပ်မှုလေ့လာမှု။ ကလေးအထူးကု။ 2007; 119: e232-e240 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Lenroot RK, Shaw P ကို, Lalonde က F, Celano M က, အဖြူရောင်က S, Tossell J ကို, Addington တစ်ဦးက, ခန္ဓာဗေဒဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ Gogtay N. ဒုံးကျည်သွားလမ်းတစ် phenotype အဖြစ်။ Novartis Symp တွေ့သည်။ 2008; 289: 101-112 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gogtay N ကို, Rapoport JL ။ ကလေးဘဝ-စတင်ခြင်း schizophrenia: neuroimaging လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 47: 1120-1124 ။ [PubMed]
Gogtay N ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Lusk L ကို, Hayashi KM, Greenstein: D, Vaituzis AC အ, Nugent TF, 3rd, Herman DH, Clasen LS, Toga AW, et al ။ အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2004a; 101: 8174-8179 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gogtay N ကို, Herman: D, Ordonez တစ်ဦးက, Giedd J ကို, Hayashi K ကို Greenstein: D, Vaitiuzis ကို C, Nugent TF, Classen L ကို, Thompson က: P, ကလေးအထူးကုစိတ်ကြွနာမကျန်းအတွက် cortical ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ Rapoport ဂျေ Dynamic မြေပုံ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004b; 29: S82-S82 ။
Gogtay N ကို, Lu ကတစ်ဦး, Leow အေဒီ, Klunder အေဒီ, Lee ကအေဒီ, ချားဗေ့စ်တစ်ဦးက, Greenstein: D, Giedd ဖြစ်မှု, Toga AW, Rapoport JL, Thompson ကဝန်ကြီးချုပ်။ tensor-based morphometry အသုံးပြု. မြင်ကလေးဘဝ-စတင်ခြင်း schizophrenia အတွက်သုံးရှုထောင်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမူမမှန်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2008; 105: 15979-15984 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kessler RC, Berglund P ကို, Demler အို Jin က R ကို, Merikangas KR, Walters က EE ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Comorbidity စစ်တမ်းပွားအတွက် DSM-IV မမှန်၏တစ်သက်တာပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်-of စတင်ခြင်းဖြန့်ဝေ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 62: 593-602 ။ [PubMed]
Lang N ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Castellanos FX, Vaituzis AC အ, Rapoport JL ။ လူ့ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအရွယ်အစား variable: အသက်အရွယ် 4-20 နှစ်ပေါင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1997; 74: 1-12 ။ [PubMed]
Lenroot RK, Gogtay N ကို, Greenstein DK, ဝဲလ် EM, Wallace GL, Clasen LS, Blumenthal JD, Lerch J ကို, Zijdenbos AP, အီဗန်, AC, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဘယ်နေရာတွေမှာ၏လိင် dimorphism ။ Neuroimage ။ 2007; 36: 1065-1073 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lenroot RK, Schmitt je, Ordaz SJ, Wallace GL, Neal MC, Lerch JP, Kendler KS, အီဗန်, AC, Giedd ဖြစ်မှု။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးနဲ့ဆက်စပ်လူ့ဦးနှောက် cortex အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုအတွက်ကွာခြားချက်များ။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2009; 30: 163-174 ။ [PubMed]
Logvinov SV, Plotnikov ကို MB, Zhdankina AA ကို, Smol'iakova VI ကို, Ivanov, Kuchin AV စနစ်, Chukicheva IV, Varakuta EIU IS ။ streptozotocin ဆီးချိုရောဂါနှင့်အို-isobornylphenol ဆင်းသက်လာခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ဆုံးမခြင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင်လွှာတွင် neuron အတွက် Morphological အပြောင်းအလဲများကို။ Morfologiia ။ 2009; 136: 42-45 ။ [PubMed]
Mackie က S, Shaw P ကို, Lenroot R ကို, Pierson R ကို, Greenstein DK, Nugent TF, 3rd, Sharp က WS, Giedd ဖြစ်မှု, Rapoport JL ။ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါအတွက် Cerebellar ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လက်တွေ့ရလဒ်ကို။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 164: 647-655 ။ [PubMed]
McClellan J ကိုဘုရင် MC ။ လူ့ရောဂါအတွက်မျိုးဗီဇပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော။ cell ။ 2010; 141: 210-217 ။ [PubMed]
Merke DP, Fields JD, Keil MF, Vaituzis AC အ, Chrousos မိသားစုဆရာဝန်, Giedd ဖြစ်မှု။ အလားအလာရှိသောကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် postnatal ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု: ဂန္မွေးရာပါ adrenal hyperplasia နှင့်အတူကလေးများ amygdala အသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွားခဲ့ကြသည်။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2003; 88: 1760-1765 ။ [PubMed]
Merke DP, Giedd ဖြစ်မှု, Keil MF, Mehlinger SL, Wiggs EA ၏, Holzer S က, Rawson အီး, Vaituzis AC အ, Stratakis, CA, Chrousos မိသားစုဆရာဝန်။ ကလေးများကုရှ syndrome ရောဂါ၏ resolution ကိုအပြီးဦးနှောက်ကျုံ့တစ်နှစ်၏ပယ်ဖျက်ခံရသည့်ကြားမှသိမြင်ကျဆင်းမှုကိုခံစားရ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2005; 90: 2531-2536 ။ [PubMed]
Neal MC, Cardon LR ။ မြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့, သိပ္ပံနဲ့ရေးရာဌာနခွဲ။ အမွှာပူးများနှင့်မိသားစုများ၏မျိုးဗီဇလေ့လာရေးနည်းစနစ်။ Dordrecht; ဘော်စတွန်: Kluwer ပညာရေးဆိုင်ရာထုတ်ဝေ; 1992 ။
Ofen N ကို, Kao YC, Sokol-Hessner P ကိုကင်မ် H ကို, Whitfield-Gabrieli S က, Gabrieli JD ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်စနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 1198-1205 ။ [PubMed]
pause T က, Zijdenbos တစ်ဦးက, Worsley K သည်, Collins က DL, Blumenthal J ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Rapoport JL, အီဗန်, AC ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရငျ့: Vivo လေ့လာမှုမှာ။ သိပ္ပံ။ 1999; 283: 1908-1911 ။ [PubMed]
pause T က, Keshavan M က, Giedd ဖြစ်မှု။ အဘယ်ကြောင့်အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာသလဲ? နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2008; 9: 947-957 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Power က JD, တရားမျှတသော DA, Schlaggar BL, Petersen SE ။ လူ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်ကွန်ရက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010; 67: 735-748 ။ ဤပြဿနာ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဆဲလ်များအတွက် Rakic ​​P. တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်း, လူသားတွေအတွက်ဧရာမခုန်: ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်း neocortical ချဲ့ထွင်တဲ့အယူအဆ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1995; 18: 383-388 ။ [PubMed]
Rapoport JL, Addington လေး, Frangou S က, psyche MR ။ schizophrenia များ၏ neurodevelopmental မော်ဒယ်: update ကို 2005 ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 10: 434-449 ။ [PubMed]
Rapoport J ကို, ချားဗေ့စ်တစ်ဦးက, Greenstein: D, Addington တစ်ဦးက, Gogtay N. Autism ရောင်စဉ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်ကလေးဘဝ-စတင်ခြင်း schizophrenia: revisited တစ်စပ်လျဉ်းမှလက်တွေ့နှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများ။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 48: 10-18 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Riva: D, Giorgi C. အဆိုပါ cerebellum ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မားတဲ့ functions ကိုအထောက်အကူပြုရန်: ခွဲစိတ် posterior fossa ကင်ဆာကုသသားသမီးများ၏တစ်ဦးစီးရီးထဲကနေသက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက်။ 2000; 123: 1051-1061 ။ [PubMed]
Schmahmann JD ။ အဆိုပါ cerebellum ၏ disorders: ataxia, အတွေး၏ dysmetria, နှင့် cerebellar သိမြင်မှုအကျိုးသက်ရောက်စေ syndrome ရောဂါ။ J ကို Neuropsychiatry Clin neuroscience ။ 2004; 16: 367-378 ။ [PubMed]
Schmitt je, Wallace GL, Rosenthal MA, Molloy EA ၏, Ordaz S က, Lenroot R ကို, Clasen LS, Blumenthal JD, Kendler KS, Neal MC, Giedd ဖြစ်မှု။ တစ်ဗီဇသိကောင်းစရာများကလေးအထူးကုနမူနာအတွက် neuroanatomic ဆက်ဆံရေး၏တစ်ဦးက multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Neuroimage ။ 2007; 35: 70-82 ။ [PubMed]
Selemon ld, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ အဆိုပါလျှော့ချ neuropil အယူအဆ: schizophrenia များ၏တစ်ဦးကတိုက်နယ်အခြေစိုက်မော်ဒယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 45: 17-25 ။ [PubMed]
Shaw P ကို, Greenstein: D, Lerch J ကို, Clasen L ကို, Lenroot R ကို, Gogtay N ကို, အီဗန်တစ်ဦးက, Rapoport J ကို, ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် Giedd ဂျေအသိဥာဏ်စွမ်းရည်နှင့် cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ သဘာဝ။ 2006a; 440: 676-679 ။ [PubMed]
Shaw P ကို, Lerch J ကို, Greenstein: D, Sharp ကဒဗလျူ, Clasen L ကို, အီဗန်တစ်ဦးက, Giedd J ကို, Castellanos FX, အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် cortical အထူနှင့်လက်တွေ့ရလဒ်ကို၏ Rapoport ဂျေ longitudinal မြေပုံ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006b; 63: 540-549 ။ [PubMed]
Shaw P ကို, Eckstrand K သည်, Sharp ကဒဗလျူ, Blumenthal J ကို, Lerch JP, Greenstein: D, Clasen L ကို, အီဗန်တစ်ဦးက, Giedd J ကို, Rapoport JL ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ cortical ရငျ့အတွက်နှောင့်နှေးသဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2007a; 104: 19649-19654 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Shaw P ကို, Gornick M က, Lerch J ကို, Addington တစ်ဦးက, အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် J ကို, Greenstein: D, Sharp ကဒဗလျူ, အီဗန်တစ်ဦးက, Giedd ဖြစ်မှု, Castellanos FX, Rapoport JL ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါအတွက် dopamine D4 အဲဒီ receptor ၏ polymorphic, လက်တွေ့ရလဒ်ကိုနှင့် cortical ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007b; 64: 921-931 ။ [PubMed]
Shaw P ကို, Lerch JP, Pruessner JC, တေလာ KN, နှင်းဆီ AB, Greenstein: D, Clasen L ကို, အီဗန်တစ်ဦးက, Rapoport JL, Giedd ဖြစ်မှု။ ကွဲပြားခြားနားသော apolipoprotein E ကိုဗီဇ polymorphic နှင့်အတူကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် cortical shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်: တစ်ခုစူးစမ်းလေ့လာမှု။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet Neurol ။ 2007c; 6: 494-500 ။ [PubMed]
Shaw P ကို, Sharp က WS, Morrison က M, Eckstrand K ကို Greenstein DK, Clasen LS, အီဗန်, AC, Rapoport JL ။ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါအတွက် Psychostimulant ကုသမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ cortex ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 166: 58-63 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sobel LJ, Bansal R ကို, Maia တီဗီ, Sanchez J ကို, Mazzone L ကို, Durkin K ကိုလျူ J ကို, Hao က X ကို, et al Ivanov ငါ Miller ကတစ်ဦး။ Basal ganglia မျက်နှာပြင် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူလူငယ်အတွက်လှုံ့ဆော်ဆေးဝါးများများ၏သက်ရောက်မှုများ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 167: 977-986 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sowell ER, Thompson ကလေး, Tessner KD, Toga AW ။ postadolescent ဦးနှောက်ရငျ့စဉ်အတွင်းပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေး: မြေပုံကဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် dorsal တိုကျရိုကျ cortex အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆလျှော့ချရေးဆက်ပြောသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 8819-8829 ။ [PubMed]
Sowell ER, Thompson ကလေး, SE, Henkenius AL, Toga AW, Peterson BS မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်အတူကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် cortical မူမမှန်။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2003; 362: 1699-1707 ။ [PubMed]
Sowell ER, Thompson ကလေး, Toga AW ။ အသက်တာ၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးလူ့ cortex အတွက်မြေပုံအပြောင်းအလဲများ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2004; 10: 372-392 ။ [PubMed]
Thompson ကလေး, Vidal, C, Giedd ဖြစ်မှု, Gochman P ကို, Blumenthal J ကို, Nicolson R ကို, Toga AW, Rapoport JL ။ ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲပုံဖော်စောစောစီးစီး-စတင်ခြင်း schizophrenia အတွက်အရှိန်မြှမီးခိုးရောင်ကိစ္စဆုံးရှုံးမှုပြောင်းလဲနေသောလှိုင်းဖော်ပြသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2001; 98: 11650-11655 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tiemeier H ကို, Lenroot RK, Greenstein DK, Tran L ကို, Pierson R ကို, Giedd ဖြစ်မှု။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Cerebellum ဖှံ့ဖွိုးတိုး: တစ် longitudinal morphometric MRI လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2010; 49: 63-70 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wallace GL, အဲရစ် Schmitt J ကို, Lenroot R ကို, Viding အီး, Ordaz S က, Rosenthal MA, Molloy EA ၏, Clasen LS, Kendler KS, Neal MC, Giedd ဖြစ်မှု။ ဦးနှောက် morphometry ၏တစ်ဦးကကလေးအထူးကုအမွှာလေ့လာမှု။ J ကိုကလေး Psychol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 47: 987-993 ။ [PubMed]
Weinberger DR ။ schizophrenia များ၏ pathogenesis များအတွက်ပုံမှန်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ဂယက်ရိုက်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1987; 44: 660-669 ။ [PubMed]
Weinberger DR, Berman KF, Suddath R ကို, Torrey EF ။ schizophrenia အတွက် prefrontal-limbic ကွန်ယက်၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုအထောက်အထား: တစ်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်စိတ်တိုးပွား monozygotic အမွှာ၏ဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုလေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1992; 149: 890-897 ။ [PubMed]